Inona izany, ny fomba fiasany ary inona izany ho an'ny Caliber Portable | Ireo mpamaky rehetra
Portable Caliber: Inona izany, inona izany ho azy sy ny fomba fiasany
Eder Esteban | | fakan-tahaka toa, General
Eo amin'ny tontolon'ny eReaders dia misy hevitra izay fantatry ny mpampiasa maro. Isan'andro dia mahita anarana sasany isika, izay mahatonga azy ireo ho lasa zavatra mahazatra antsika indrindra. Ny anarana iray izay inoana fa mahazatra ny maro dia Caliber Portable. Na dia betsaka aza ny olona tsy mahalala tsara hoe inona izany. Noho izany, hanazava bebe kokoa aminao eto ambany izahay.
Mba hahafantaranao tsara hoe inona ny Caliber Portable ary koa inona no azontsika ampiasana azy sy ny fomba fiasany.. Araka izany, raha toa ka mahaliana anao izany dia azonao atao tsara ny mampiasa azy. Vonona ny hahafantatra ny zava-drehetra momba an'io fitaovana io?
Ny zavatra voalohany hataontsika hanazava bebe kokoa momba ny Calibre Portable, izay misy azy ary inona no tena fampiasany. Ho fanampin'ny tantara fohy momba ny fivoarany hatramin'ny nahatongavany teny an-tsena. Ny fampahalalana ilaina mba hanananao hevitra mazava momba izany.
1 Portable caliber: inona izany ary inona no ilana azy?
2 Tantara Portable Caliber
3 Ahoana ny fampidinana Caliber Portable
4 Ahoana ny fiasan'ny Caliber Portable
Portable caliber: inona izany ary inona no ilana azy?
Izy io dia mpitantana e-book maimaim-poana. Mamela antsika mandahatra mora foana ary mandrindra e-boky. Ny zavatra ataony dia ny mitahiry ireo boky ao anaty tahiry ary avy eo mamela antsika hikaroka mazava tsara izay tadiavintsika. Amin'ny ankapobeny dia afaka mitahiry boky mifototra amin'ny masontsivana maro samihafa isika toy ny lohateny, mpanoratra, mpanonta na daty namoahana. Amin'izany fomba izany dia mora kokoa ho antsika ny mandamina ny zavatra rehetra. Ka rehefa mitady zavatra isika dia tsy handany fotoana firy.
Ho fanampin'izany, Caliber Portable dia manome safidy maro hafa ho antsika. Satria afaka mampiasa azy io koa isika hanovana endrika. Izy io dia programa iray izay ahafahantsika mamadika ny eBooks ho endrika isan-karazany. Mety raha manana eReader mihoatra ny iray isika ary mila miasa amina endrika hafa. Amin'ity tranga ity, ny programa dia mizara ny endrika fampidirana sy fivoahana:
Endrika fampidirana: ePub, HTML, PDF, RTF, txt, cbc, fb2, lit, MOBI, ODT, prc, pdb, PML, RB, cbz ary cbr
Forms amin'ny famoahana: ePub, fb2, OEB, lit, lrf, MOBI, pdb, pml, rb.3
Azontsika atao ny miasa amin'ireo karazana fisie rehetra ireo noho ity rindrambaiko ity. Ka fitaovana iray miavaka amin'ny fahaiza-manaony izy io., satria afaka mampiasa an'io ny ankamaroan'ny mpampiasa. Satria izy io dia manohana ireo endrika lehibe indrindra amin'ny eBook izay raisina anio.
Azontsika atao koa ny mampiasa an'io rindrambaiko io mandrindra e-boky eo anelanelan'ny fitaovana sasany. Tsy ny maodely rehetra eny an-tsena no mahazo fanohanana, satria io dia voafetra amin'ny Amazon Kindle ihany, ny maodely Sony sasany ary koa ny iPhone sy iPad. Saingy mpampiasa maro no afaka mahazo tombony amin'ity fampiasa ity.
Farany, afaka mampiasa Caliber Portable amin'ny zavatra hafa izahay. Satria mamela antsika hikaroka vaovao ihany koa izany. Azontsika atao ny manamboatra azy io mba hikarakarana ny fikarohana ary handefa vaovao ho azy avy amin'ny tranonkala maro samihafa. Tsy azo atao ny manao azy amin'ny tranokala rehetra, miaraka amin'ny sasany izay nifanarahan'ny orinasa. SAINGY afaka mahazo vaovao amin'ny BBC, The New York Times na Wall Street Journal amin'ny eReader izahay.
Fa inona ny ISBN ary inona no ilana azy?
Tantara Portable Caliber
Ny orinasa namorona an'ity rindrambaiko ity dia Caliber, izay nanomboka ny asany tamin'ny 2006. Kovid Goyal no mpamorona sy mpanorina ny orinasa. Ny iray amin'ireo antony namoronana ny orinasa dia tamin'izany fotoana izany dia tsy nisy fitaovana kalitao namela anao avadiho ny endrika LRF izay nampiasain'ny mpamaky Sony amin'izao fotoana izao. Ka nanapa-kevitra ianao fa hampiditra mpanova rakitra.
Amin'izany fomba izany dia azonao atao ny mamadika ireo endrika eBook malaza indrindra eny an-tsena ho endrika LRF. Nanjary fahombiazana lehibe ity mpanova ity ary nisondrotra ny lazan'ny Caliber.. Rehefa nandeha ny fotoana dia hitan'ny mpamorona ny orinasa nitombo tsy tapaka ny fanangonany ny boky elektronika. Saingy, niharatsy hatrany ny fitantanana sy ny fitantanana azy ireo.
Noho izany, nanapa-kevitra ny hamorona interface tsara izay hanamora ny fandaminana ny e-book rehetra izay notehirizinao tao amin'ny eReader anao. Io no lasa fantatsika ankehitriny hoe Caliber Portable. Anarana nofidina satria maneho ny fahalalahana, satria programa maimaimpoana sy loharano misokatra. Ka afaka manova azy ny mpampiasa rehetra.
Androany dia nisy vondron'olona lehibe niforona nanodidina ny orinasa. Betsaka ny mpamorona sy mpanandramana miandraikitra ny fanavaozana sy ny fampidirana endri-javatra vaovao, ankoatry ny fitadiavana bug ao amin'ilay programa. Ho fanampin'izay dia nadika tamin'ny fiteny samihafa izy io. Satria ny Caliber Portable dia ampiasaina any amin'ny firenena 200 manerantany ankehitriny. Ohatra tsara amin'ny fahombiazana nananan'ilay fitaovana.
Ny fitomboana niainany dia tsy vokatry ny kisendrasendra. SATRIA Fantatra fa satro-boninahitra toy ny iray amin'ireo fitaovana be mpampiasa indrindra eny an-tsena. Araka ny efa hitanao taloha, azonay ampiasaina amin'ny asa maro samihafa. Manomboka amin'ny fandaminana ny e-bokinay ka hatramin'ny fanovana eo anelanelan'ny endrika. Noho izany dia nanjary safidy lehibe ho an'ny mpampiasa maro izy io.
Ahoana ny fampidinana Caliber Portable
Ny programa dia havaozina tsy tapaka, raha ny marina dia tamin'ny faran'ny volana martsa ny fanavaozana farany. Noho izany, ny fanatsarana dia ampidirina tsy tapaka, ankoatry ny fanatsarana ny fiarovana. Ka programa azo antoka ary tsy hanome anao olana isan-karazany izany.
Azontsika atao ny misintona azy mivantana avy amin'ny tranokalan'ny orinasa, izay ahafahantsika manandrana demo ihany koa. Araka izany, azontsika atao ny mahita raha safidy iray tena mahaliana antsika na tsia. Azonao atao ny mitsidika ny tranonkala ary misintona ny demo sy ny programa amin'izany rohy. Azontsika atao koa misintona amin'ny rafitra fiasa rehetra ary ampidino koa ny kinova ho an'ny USB. Azontsika atao ny mametraka azy avy eo amin'ny fitaovana ilaintsika. Tena mety tokoa ny mampidina azy io.
Tsy ny tranonkala ofisialy irery no misy ny Caliber Portable. Satria misy hafa pejy web maro ho an'ny fisintomana programa toa ny Softonic na CCM izay ahafahantsika misintona azy. Safidy azo antoka ihany koa izy ireo. Ka tsy hisy ny olana raha te-misintona ilay programa amin'ireo ianao.
Ny zava-dehibe rehefa mitady ny programa dia sintomy avy amin'ny pejy azo antoka sy azo antoka. Zava-dehibe izany, satria amin'ity fomba ity dia manakana ny fandrahonana tsy hiditra ao amin'ny solosaintsika isika.
Ahoana ny fiasan'ny Caliber Portable
Ny interface Caliber dia tena tsotra sy ahazoana ampiasaina. Ao amin'ny tranokala mihitsy no ananantsika ny fampisehoana hita izay ahitantsika ny fomba fiasan'izy io amin'ny solosaina. Afaka mitsidika azy ianao eto ary jereo raha volavola iray izay ho mora aminao ny mampiasa azy. Noho izany, tsy misy mpampiasa hanana olana amin'ny fampiasana an'io fitaovana io. Ho hitanao fa tena ahazoana aina, ankoatry ny fanomezana anao fampiasana maro isan-karazany.
Azonao atao ny mandamina ny eBooks anao amin'ny fomba tsotra ary noho izany dia ho mora kokoa aminao ny mahita ny zavatra rehetra notehirizinao tao amin'ny fitaovanao. Ho fanampin'izay, afaka mandamina ireo boky mifanaraka amin'ny masontsivana tadiavinay izahay (mpanoratra, lohateny, mpanonta, daty famoahana, ISBN ...). Ny fomba ahazoana aina indrindra handaminana anay.
Eo an-tampon'ny ananantsika dia manana ny fitaovana ahitantsika ireo safidy samihafa omen'ny Caliber Portable antsika. Afaka mahita ny bokintsika rehetra isika ary manana koa ny fitaovana mamela antsika hanova azy ireo amin'ny endrika hafa. Ka raha mila miasa amina endrika hafa isika amin'ny fotoana rehetra dia afaka mamadika azy amin'ny fampiasana ilay fitaovana amin'ny fomba tsotra isika.
Azontsika atao ihany koa ny mandefa azy ireo amina fitaovana hafa tena milay, ny eReader amin'ity tranga ity na iPhone na iPad aza. Zavatra iray izay mampiseho amintsika fa fitaovana be dia be izy io ary manome antsika fahafaha-manao betsaka. Aza misalasala misintona Caliber Portable, satria hanampy anao betsaka izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ireo mpamaky rehetra » General » Portable Caliber: Inona izany, inona izany ho azy sy ny fomba fiasany
Amin'izao fotoana izao dia tsy azoko an-tsaina ny fananana trano famakiam-boky e-boky tsy misy an'ity programa ity.
Ny antidote tonga lafatra hiadiana amin'ny endrika eBook tompona sy ny ekosistema mihidy.
Sony dia miverina amin'ny tontolon'ny eReader miaraka amin'ny Sony DPT-CP1
Inona no atao hoe Mobipocket Creator, ahoana ny fomba fiasany ary inona no ilana azy